I-Semalt: Akubandakanyi i-Rigor Monitoring Stations Kusuka ku-Web Analytics
U-Nik Chaykovskiy, iMenenja YokuPhumelela Kwamakhasimende Ephezulu Semalt , uthi ukusebenzisa i-Real Checks Checks kuyindlela enhle kakhulu yokuqapha ukusebenza kwewebhusayithi nokuphatha isipiliyoni samakhasimende. I-Rigor inkampani esiza ngalezi zihlole ngokuqinisekisa ukuthi ihlola iwebhusayithi yeklayenti kwisiphequluli sangempela. Isizathu esenza u-Rigor enze lokhu ukubona ukuthi isikhathi esingakanani ikhasi lizothatha kwisiphequluli somsebenzisi. Ihlanganisa wonke amafayela wesithathu njengamawijethi womphakathi, ukuphakela kwedatha, amanethiwekhi wesikhangiso, ama-analytics nama-CDN.
Abanikazi bewebhusayithi kufanele baqaphele nezimbangela ezivamile zokulayisha kwekhasi elincane. Ngaphandle kwezifo nge-malware, ama-Trojans, nama-virus, izakhi zangaphandle zingaholela ekulayisheni kancane. Bangezela inzuzo kusayithi, kodwa kwiwebhusayithi ehlose ukusebenza, kufanele ibuke la ma khodi angenisiwe. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi lezi zakhi zenkampani yangaphandle zingabambezela ukulayishwa kwekhasi eliphelele kuze kube umzuzu. Kubalulekile ukunikela ngamanye amasevisi ahlangana ndawonye nalezi zici ezengeziwe. Noma kunjalo, ziza ngezindleko, futhi kufike kumnikazi ukucacisa lezo ezihambelana nesayithi nalabo abangekho. Isu esihle kunazo zonke sokwenza lokhu ngokuphumelelayo ukufeza ukuhlaziywa kwezindleko ezizuzayo kuzo zonke izici zenkampani yangaphandle.
Njengoba i-Rigor ilandela konke okuqukethwe kwekhasi kuwo wonke amazinga wokuqapha iwebhusayithi, kuzodingeka ukuthi umuntu akhiphe yonke imoto eyenziwe iziteshi zokuqapha. Uma kungenjalo, zingase ziholele ku-Google Analytics ekudaluleni imiphumela emisiwe. Kukhona inqubo okumele ilandelwe ukuqinisekisa ukuthi umsebenzisi akafaki yonke imoto kusuka eziteshini zokuqapha. Ipulatifomu evamile kakhulu ye-analytic esetshenziselwa lokhu yi-Google Analytics..
Izinyathelo ezisetshenziswe ku-Google Analytics ziyonke. Kusho ukuthi akukhathaleli ukuthi iyiphi ipulatifomu yokuhlaziya oyisebenzisayo, umhlahlandlela ufana nabo bonke. Kule ngqikithi, sizobonisa lokhu ngokusebenzisa isiteji se-Google Analytics, evamile kumawebhusayithi amaningi.
Nansi okudingeka ukwenze:
Ngena ngemvume ku-software ye-Google Analytics
Ekuvuleni, thola ithebhu yomlawuli, okukuletha uhlu lwamaphrofayli ongakhetha.
Khetha iphrofayli efanele. Kulokhu, uRigor uzoba yisinqumo esihle kakhulu.
Chofoza kuzihlungi zamathebhu ukusuka kokungezansi okunikeziwe
Khetha isihlungi esisha + sokwakha isihlungi esiyinkimbiso yesayithi.
Uma ufinyelela kuleli phuzu, umuntu angahle adlule ohlwini lweziteshi zokuqapha ukuthi i-Rigor okwamanje isendaweni. Banikeza uhlu olugcwele lwezindawo ze-Rigor neziteshi zabo zokuqapha, ngekheli labo le-IP, ikhodi yesifunda, nendima eyabelwe yona. Uma ukuhlonza amakheli e-IP kuqediwe, buyela emuva ku-Google Analytics ukuqedela izihlungi zangokwezifiso.
Ngaphansi kwesihlungi esisha, hamba ku "Engeza Isihlungi kuphrofayela."
Hlola ibhokisi nge-prompt ukubuza noma ukwakha isihlungi esisha.
Ulwazi lokuhlunga, igama lokuhlunga kufanele lifake indawo yesiteshi sokuqapha, hlola isihlungi esinqunjisiwe kuhlobo lokuhlunga. Faka amakheli we-IP eziteshini zokuqapha ezithintekayo.
Ayikho iphuzu lokukhipha iziteshi ezisemaphakathi noma zokuqukethwe kusukela zingabonakali kuma-analytics jikelele. Ngempela, lokhu kuqedile, yonke imoto esuka eziteshini zokuqapha ayiveli emibikweni.